Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment प्रधानमन्त्री ओलीलाई रावलको प्रश्न : स्पष्टीकरण सोध्न तपाईंलाई लाज लाग्दैन ? - Pnpkhabar.com
प्रधानमन्त्री ओलीलाई रावलको प्रश्न : स्पष्टीकरण सोध्न तपाईंलाई लाज लाग्दैन ?
काठमाडौं, १० चैत : एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको विधान विपरीत आफूहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्न लाज लाग्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार माधव नेपाल पक्षको अनेरास्ववियुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता रावलले आफै पार्टीको विधि र विधानविपरीत निर्णय गर्दै जाने ओलीले नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्न लाज लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेता रावलले एमाले केन्द्रीय समितिमा आफ्ना मान्छेहरूलाई मनोनयन गरेर अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटाउने र विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप पनि लगाए । ‘हाम्रो पार्टीको विधानको धारा १३ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनको कुरा छ । महाधिवेशनअघि विधान अधिवेशन गर्न सकिन्छ तर त्यसभन्दा अघि केन्द्रीय समितिबाट छलफल गरेर मात्रै विधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर ओलीले बालुवाटारमा गुटको भेला गरेर पार्टी विधान संशोधनका नाममा मनलाग्दी गरेका छन्’, रावलको भनाइ छ ।
उनले नवौँ महाधिवेशनबाट बनेको विधान कुल्चेर, उल्लंघन गरेर विधानमा हुँदै नभएको आयोजक कमिटी गठन गरेको समेत बताए । ‘विधान कुल्चेर हामीलाई हटाएको रे, अनि तपाईंहरुले अनुशासन मान्नुभएन, बैठकमा आउनु भएन भनेर स्पष्टीकरण सोध्न तपाईंलाई लाज लाग्दैन ?’ नेता रावलको प्रश्न छ ।
उनले फागुन २८ गते बालुवाटारमा बसेको भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक नै अवैध भएको भन्दै उक्त बैठकका निर्णय नमान्ने दोहोर्याए । ‘बालुवाटार बैठकको फागुन २८ को केन्द्रीय कमिटी भनिएको बैठकको निर्णय मान्दैनौँ । आफ्नो विधान मिचेर तपाईंले मनपरी किन गर्नुभयो ?’ रावलले प्रश्न तेस्र्याए ।
उनले आफ्नो सम्बोधन अघि ‘युवा हो उठ, एक भै जुट, यो देश जोगाउन, कम्युनिस्ट मास्ने राज्यलाई नास्ने भष्मासुर भगाउन । हामीले सोच्यौँ स्वाधीनता देशको हिमाल झैँ उठाउन, विश्वका सामु समाजवाद युक्त नेपाल चिनाउन…’ भन्ने गीत समेत गाएका थिए ।